MH Overview - Banyere anyị - Ningbo MH
E guzobere Ningbo MH Industry na 1999, ọkachamara na ngwa ngwa akwa na ihe eji egwu ya. Mgbe afọ ole na ole gasịrị, MH guzobere mmekọrịta mmekọrịta karịa mba 150, a na-akpọ Mh ụlọ ọrụ "Top 500 China Service Industry" na "AAA Trustworthy Company", na "MH" ahaahia na-enwe ezigbo aha ma na ụlọ na n'elu ahịa .
Site na afọ 16, ugbu a MH nwere ihe karịrị 3,500 staffs, 5 nnukwu ntọala (ngụkọta 382000m2), na-enye ikike ruo 1500tons / ọnwa maka akwa akwa na eri, 200tons / ọnwa maka embroidery eri, na 700,000Y / ọnwa maka lace ákwà. MH kwalitekwara nkwado dị ogologo oge karịa ndị na-emepụta 1500 maka ihe karịrị ụdị 1000 ụdị dị iche iche ihe eji akwa.
Ugbu a, MH nwere 40 n'elu ụlọ ọrụ dị iche iche na mba dị iche iche, iji nye ndị ahịa ngwa ngwa ọrụ mpaghara, nakwa na ERP, MH APP na usoro IT ndị ọzọ, MH nwere ike ịnye ọrụ ọrụ onye ọrụ ọ bụla n'ebe niile. N'agbanyeghị otu onye ahịa na MH, site na E-mail, fax, ekwentị, APP IM ma ọ bụ ihu na ihu, onye ahịa nwere ike ịnweta ọrụ nke ọma, ngwa ngwa na ọrụ ọrụ.
MH ga-agbasi mbọ ike ịmepụta mba nke onye na-azụ ihe, iji nye ndị ahịa ọnụahịa zuru oke, ọnụahịa dị mma, nnyefe oge, ngwaahịa ndị na-arụ ọrụ kwesịrị ekwesị.
MH Overview Home Categories --Na-atụgharị --Zippers --Ribbon & Tape --Ụzọ --Laces --Buttons --Interlining --Tassel & Fringe / Trimming --Tailoring Ngwa --Garments & Ngwa --Nweghari Machine & Akụkụ --Fabric --Onye ozo gbasara Anyị --MH Isi --MH Industrial --MH History --Trade Na-egosi - Ndị ọrụ anyị - Oghere Image - Album vidio Kpọtụrụ Anyị --Odi ebe --Feedback Community --Blog --App --Sonyere anyị